Ukuthengwa kweArhente, iArhente yokuThumela, iNkonzo yaBucala-eYunis
Sinomboneleli wexesha elide kunye nozinzo wamawaka weefektri kunye namashumi amawaka eevenkile ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha kunye nomgangatho weempahla zakho ozikhethileyo.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 kwishishini, siye saqulunqa ubudlelwane obusondeleyo kunye nabathengisi ababalaseleyo e-china.
Siza kukubonelela ngenkonzo eyeyakho, eyeyomntu ngamnye ehambelana neemfuno zakho kwaye ufumane imveliso ehlangabezana neemfuno zakho kwaye ineendleko ezifanelekileyo.
Ukuba ufuna iarhente yobuchwephesha yokuqhuba ishishini lakho elitsha kunye nokwenza indawo entsha nenamandla okukhulisa uphawu lwakho, siya kwenza isisombululo esikufanelayo.
Singenza ngaphezulu kunokuba ucinga, ngekhe uzisole ngokhetho lwakho
Nokuba uyinkampani yokuqalisa okanye inkampani ehamba phambili yokurhweba, elona celomngeni lokwenza ishishini kukufumana imveliso yentengiso efanelekileyo yokwandisa inzuzo yakho. Kuya kufuneka ufumane i-t ...
Iinkonzo zethu zoNxibelelwano IiFaecis horrifer caelo aere nisi. Ipiscibus coeg ...
Ngokwe-Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd., ngoMeyi 10, i-Yiwu yokuThengiswa kweMveliso yeSixeko soMmandla wokuFakelwa kweeNdawo zakha indawo yokubonisa kwiHolo 1 yokuqala ye-China International Consumer Goods Fair (CICGF) ...
Yunis International Trade (HK) Co., Ltd. yasekwa ngo-2011. Yinkampani kunye namalungelo ukungenisa kunye nokuthunyelwa kumazwe angaphandle nguRhulumente State of Trade Foreign and Cooperation Uqoqosho kunye noLawulo Jikelele Customs. Inkampani inesiseko esomeleleyo soqoqosho, uthungelwano olomeleleyo lobudlelwane, kunye nabasebenzi abagqibeleleyo. Ngokungena kwe China kwi-WTO, urhwebo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle luyakhula. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabarhwebi nabangenisa elizweni…